‘हाम्रो पूर्वाञ्चल अन्तर्राष्ट्रिय गोल्डकप’ भोलिदेखि
कनकाई – झापाको डोमलाल राजवंशी रंगशालामा शनिवारदेखि ‘हाम्रो पूर्वाञ्चल अन्तर्राष्ट्रिय गोल्डकप’ सञ्चालन हुने भएको छ ।
कात्तिक १६ गतेदेखि शुरू हुने गोल्डकपको तयारी पूरा भएको जनाएको आयोजक जायोन स्पोर्टस क्लबले यसअघि ८ वटा टोलीले सहभागिता जनाउने बताएको थियो ।
पछिल्लोपटक आयोजकले आफ्नो टोली पनि गोल्डकपमा समावेश गरेको छ । यसअघि तय गरिएको मिति र खेल तालिकामा आयोजक सहभागी थिएन । गोल्डकपको उद्घाटन खेलमा आयोजक र सिक्किम आक्रामक एफसी आमने–सामने हुने भएका छन् ।
प्रतियोगितामा आयोजक जायोन स्पोर्ट्स क्लबसहित २ वटा भारतीय टोली सिक्किम आक्रामक र संकटा क्लब मोलवे आसामको सहभागिता रहने बताइएको छ । त्रिभुवन आर्मी क्लब, सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब, झापा ११ एफसी, नेपाल पुलिस क्लब र गोर्खा ब्वाइज रुपन्देहीको सहभागिता रहने छ ।
असोज दोस्रो सातादेखि प्रतियोगिता शुरू हुने तयारी गरिएपनि मौसमको प्रतिकूलताका कारण खेल स्थगित भएको थियो । त्यसपछि आयोजकले अखिल नेपाल फूटबल संघ (एन्फा) सँग कात्तिक २ गतेदेखि प्रतियोगिता आयोजना गर्न समय माग गरेको थियो ।
एन्फाले सो समयमा अन्यत्र प्रतियोगिता भएको हुनाले समय दिन नसकेपछि कात्तिक १६ को मिति तय भएको बताइएको छ । एन्फासँग भएको सहमतिसँगै कात्तिक २५ गते फाइनल खेल हुने गरी प्रतियोगिता हुन लागेको छ ।
प्रतियोगिताका लागि लगभग ५ हजार दर्शक बस्न मिल्ने बाँसको प्यारापिट निर्माण गरिएको आयोजक क्लबका खेल संयोजक अभिनाश राईले जानकारी दिए । १० हजार दर्शकले खेल अवलोकन गर्न सक्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको बताइएको छ । खेल संयोजक राईले प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिएका छन् ।
नेपाली महिला फुटबल टोलीका प्रशिक्षक हरि खड्कालाई आयोजक क्लबले ‘ब्रान्ड एम्बेसेडर’ बनाएको छ । प्रतियोगिताको उत्कृष्ट गोलकिपर, उत्कृष्ट डिफेन्डर, उत्कृष्ट फरवार्ड, उत्कृष्ट मिडफिल्ड र उदीयमान खेलाडीले जनही १५ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार पाउनेछन् ।
गोल्डकपको उत्कृष्ट खेलाडीले एउटा मोटरसाइकल प्राप्त गर्नेछ । झापा ११ एफसीका अध्यक्ष जलकुमार गुरुङ र विर्तामोडका युवा व्यवसायी सजेश शिवाकोटीले उक्त मोटरसाइकल प्रायोजन गरेका छन् ।
प्रतियोगिताको विजेताले नगद १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार र उपविजेताले ६ लाख २५ हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्ने आयोजक क्लबका अध्यक्ष भक्त खवासले बताए ।
राखेप सदस्य सचिव नियुक्तिमा नयाँ प्रावधान : छिनोफ...
अध्ययन भन्छ- स्वस्थ दूधले बच्चामा मोटोपनको जोखिम कम हुन्छ
मुलुकबाट ९ सय नेपाली स्वदेश फिर्ता
अमेरिकी सरकारकाे निर्णयविरुद्ध अदालत पुगे हार्वर्ड र एमआईटी विश्वविद्यालय
अमेरिकामा कोरोना संक्रमित ३० लाख नाघे
टेलिभिजन कलाकार सुशील गौडाले गरे आत्महत्या
प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा कहाँ कहाँ प्रदर्शन? (फोटो फिचर)
निगमलाई नेविसंघकाे ज्ञापनपत्र-पेट्राेलियम पदार्थकाे मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता गरियाेस्
के बलिउडमा सनी लियोनीको करिअर समाप्त भएको हो ?
महालक्ष्मी नगरपालिकामा फेरि पूर्ण लकडाउन, उद्योग व्यवसाय बन्द गर्न निर्देशन